- शुभद्रा चौधरी
साथीहरू, हजुरहरूले शिलापत्रबाट हामीजस्ता धेरै किशोरकिशोरीहरूको आफ्नै अनुभव पढिसक्नुभयो होला । कति साथीहरूको अनुभव र जीवन भोगाइहरू पढ्दा भावुक पनि बनेँ म ।
धेरै साथीहरूले गरिबी, महिलामाथिको हिंसा, असुरक्षा र समाजका बारेमा लेखेको देख्दा खुसी साथै प्रेरित हुने मौका पनि पाएँ । आज म पनि मैले अनुभव गरेको एउटा भोगाइ अनि देखेको एउटा संघर्षलाई यहाँहरूसमक्ष पस्कने जमर्को गरेकी छु । साथीहरू यो मेरो भोगाइभन्दा पनि मैले देखेको एक जना दिदीको भोगाइ हो है ।
म कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बस्छु । मेरो गाउँमै एक जना दिदी हुनुहुन्थ्यो । नाम थियो निर्मला चौधरी । तपाईंहरूलाई थाहै होला तराई क्षेत्रमा अशिक्षा र गरिबीले गाँज्दा धेरै बालबालिकाले उमेरमा पढ्न पाउँदैनन् । अझ गरिबीले कुपोषण हुने सम्भावना पनि धेरै बालबालिकामा रहन्छ ।
मैले भनेजस्तै निर्मला चौधरी दिदीको पनि परिवार ३२ जनाको थियो । संयुक्त परिवारमा हुर्किएकी निर्मला दिदी सुखले हुर्किने कुरै भएन । उनै दिदीलाई उनका बुबाआमाले ५ कक्षामा पढ्दै गर्दा पढाउन सक्दैनौँ, छोरी मान्छे पढ्नु हुँदैन, छोरी पढ्यो भने बिग्रिन्छ भन्दै स्कुल जान दिएनन् रे ।
पढ्न नजाऊ भन्दै खेतबारी र घरको काम गर्न निर्देशन दिन्थे रे । तर, पढाइको रसमा डुबिसकेकी निर्मला दिदी भने स्कुल नजान अभिभावकले दिने निर्देशनलाई कुल्चिँदै पढ्न गइन् । साथीहरू हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ नि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेर । हो, यो भनाइ निर्मला दिदीमा देखियो । उनले परिवारको अनेक निर्देशन बाबजुद पनि विद्यालय जान छोडिनन् ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? पढाइविरुद्ध परिवार नै लागेपछि उनी सहयोग माग्न र पढ्ने वातावरण मिलाइदिन विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाउँदै आग्रह गरिन् । शिक्षाको दीप छर्ने शिक्षकले उनको कुरा नमान्ने कुरै भएन । शिक्षकले परिवारलाई सम्झाएर पढ्नका लागि निर्मला दिदीलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाए । यसरी उनले विद्यालयमा पढ्न थालिन् । तर पढ्न थालेको केही वर्ष नबित्दै उनका बुबाको मृत्यु भयो ।
११ वर्षको उमेरमै बुबा गुमाएकी निर्मलालाई गरिबीले झन् चपेट्न थाल्यो । तर उनी विचलित बनिनन् । दु:ख गरेरै भए पनि एसएलसी पास गरेर छात्रावृतिमा क्याम्पस पढ्न थालिन् । पढाइमा अब्बल निर्मला मधेशी समुदायमा शिक्षित वर्गमा पर्न थालिन् ।
विस्तारै टोल, छिमेक, गाउँघरमा हुने सार्वजनिक भेला तथा कार्यक्रममा उपस्थित हुने, आफ्ना कुरा राख्ने बोल्ने प्रयासले उनी वडा नागरिक मञ्चको संयोजक हुने मौका पाइन् ।
पढाइसँगै विभिन्न सामाजिक संस्थामा आवद्ध निर्मलाले अहिले आफ्नै लगानीमा ‘निमा डेरी’ व्यवसाय सुरु गरेकी छन् । महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै उनले डेरी सञ्चालनका लागि सुरुमा त आफ्नै दाइसँग पैसाक लागि सहयोग मागिन् । तर दाइले नदिएपछि मुद्दा लडेरै भए पनि दाइसँग अंश लिइन् ।
हाल एक वर्षदेखि उनले आफूले पाएकाे अंशकाे जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्दै आएकी छन् । डेरी सञ्चालन गर्दा उनलाई धेरै चुनौती आए । 'थारू महिलाहरू महिनावारी बार्दैनन्, यसको पसलको दूध कसले खान्छ ?' जस्ता प्रश्न र प्रहार भइरहे पनि उनी वास्तै नगरी अगाडि बढिरहिन् । अहिले निर्मलाको व्यवसाय बढ्दै गइरहेको छ ।
उनलाई गरिबीमा बाँच्नुपरेको छैन । घर खर्च आफैँ टार्दै आएकी छिन् । निर्मला दिदीले आफू मात्रै होइन, गाउँभरिका दिदीबहिनीहरूलाई महिला आर्थिक सशक्तीकरणका बारेमा सिकाउने, लैङ्गिक हिंसा, कुरीति, कुसंस्कारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।
साथीहरू, निर्मला दिदीको संघर्षले मलाई भने राम्रो प्रेरणा दिएको छ । आत्मविश्वास दह्रो हुने मान्छेलाई सफलताको शिखर चुम्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यसकाे राम्रो उदाहरण मैले निर्मला दिदीको संघर्षबाट पाएँ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १५, २०७७, १८:३३:००